मलिना कसकी ‘रानी’ ? हेर्नुस् टिजर « Ramailo छ
मलिना कसकी ‘रानी’ ? हेर्नुस् टिजर
फिल्म ‘रानी’ को टिजर रिलिज भएको छ । झण्डै डेढ मिनेट लामो टिजरमा एक मलिना जोशी, शारुख ताम्राकार, मनिष सुन्दर श्रेष्ठलाई देख्न सकिन्छ भने अनुपविक्रम शाहीलाई टिजरको अन्त्यमा एक संवादका साथ देख्न सकिन्छ । दयाराम दाहाल निर्देशित फिल्म ‘रानी’ को टिजर हेर्नुस् :
टिजर रिलिज भएपनि फिल्मको प्रदर्शन मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन । टिजरमा ‘चाँडै आँदैछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । टिजर हेर्दा रानी त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा आधारित हो भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । भानु महर्जनको प्रस्तुती रहेको फिल्ममा विमलमान गुभाजुको निर्माण छ ।